Ndeupi musiyano uripo pakati pechinzvimbo chevagari uye chinotsiva bhokisi
Shanduko yebhokisi inowedzera kudiwa munyika medu, kushandiswa kwevakawanda, nzvimbo yevagari uye yekumisikidza yebhokisi chii mutsauko, hatisi kujekesa, anotevera magetsi eNuo kuti iwe ugadzire mhinduro, tarisa pamwe chete. (1) Bhokisi remhando inoshanduka yekumisikidza kutenderera ipfupi, whi ...
Chii chinonzi yechipiri precast kamuri
Chekutanga pane zvese, tinofanirwa kuziva kuti kabhini yakagadzwa yemidziyo yepakutanga ndiyo michina inopedzisa basa rekugadzira, kufambisa uye kugovera, iyo inosanganisirawo magetsi akagadzwa kabhini yemagetsi, mafambisi wedunhu, zvazvino nemagetsi magetsi, shandura .. .
Ndeapi magetsi emagetsi muiyo photovoltaic grid-yakabatana kabhineti?
Mumakore achangopfuura, photovoltaic yakawedzera nekukurumidza. Seye inotungamira indasitiri yesimba nyowani, zvishoma nezvishoma yakauya kuhupenyu hwedu. Pakati pavo, ivhu photovoltaic inonyanya kuiswa munzvimbo dzemakomo, magwenga, nzvimbo dzakapoteredza nedzimwe nzvimbo kuti ishandise zvizere ivhu rakaitwa dongo. Izvo zvakagoverwa ...
Chimiro cheakagadzika kabhineti
Sekondari yakagadzirirwa kabhini mumaguta emagetsi pasi pechikonzero chekuenderera mberi kwekukura kwakaramba kwakagadzikana magetsi, kuverengera magetsi eguta rese, mumaguta mazhinji echipiri-tier, gidhi rekuvaka magetsi rakanyanya uye rakakura, iko kuita kukuru ndekwekuti: kuvakwa kwe h ...
Mamiriro ehunhu uye musimboti weiyo inflatable kabati
Iyo inflatable kabati inoshandiswa zvakanyanya uye zvakanyanya mumakore achangopfuura, budiriro iri kuwedzera nekukurumidza zvakanyanya, mazhinji emagetsi machena achiri kusaziva chimiro chehunhu uye musimboti weiyo inflatable kabhineti, anotevera magetsi kukuudza nezvazvo. Maumbirwo ehunhu e1. Iyo cabine ...
Chimiro chemukati chendarira keji
Iyo yemukati dhizaini yeringi keji (1) mhete keji inoumbwa nezvikamu zvina: chinja kamuri, iyo fiyuzi kamuri, yekushandisa mashandiro mukamuri uye tambo kamuri (chassis). (2) Iyo switch yekamuri inoumbwa yega yega inoshanda wedunhu (inosanganisira yekumisikidza switch uye mutoro switch) yakavharwa mukati mangu ...
Iko basa, mashandiro uye musimboti weanti-chitsuwa-chishandiso che photovoltaic simba chiteshi
Nekuvandudzwa kweThe Times uye nekuwedzera kwesimba rekuda, photovoltaic simba rekugadzira riri kuwedzera kuve rakakurumbira. Isolate phenomenon inokonzerwa neasina kujairika magetsi kana frequency mune photovoltaic magetsi zviteshi zvinokanganisa kuchengetedzeka kweruzhinji uye nevashandi vekuchengetedza po ...
Musiyano uripo pakati pesrm16 inflatable kabati uye KYN28 yepakati kabati
Yakaputirwa zvakakwana uye yakasimbiswa zvizere uye yakazara mweya, inonzi inflatable kabhineti; Iyo yepakati kabati, yepakati yakakwira voltage kabati, ndiyo wedunhu mudariki inogona kudhonzwa, kubva kunotevera mapoinzi kuongorora musiyano uri inflatable kabati uye yepakati kabati, ini ndinovimba iye ...
Musiyano uripo mhete keji uye mhete mambure cabinet
Nekukura kuri kukura kwesimba, nzvimbo zhinji uye dzakawanda dzekushandisa mhete keji uye mhete network kabati, mazhinji angori mumagetsi madiki machena, havanzwisise mhete keji uye rin'i mambure kabati pakupedzisira chii mutsauko, nhasi kutaura iwe nezve mutsauko uripakati pavo. Mhete mhete ...
Musiyano uriko mhete mambure cabinet uye aerated cabinet?
Mhete mhete makabati anoiswa mukati maererano nechishandiso. Inoreva chokwadi chekuti switchgear inofanirwa kunge iri paneti network. Mazhinji eaya switchgear mutoro switchgear uye musanganiswa makabati emagetsi ane ratidziro yazvino haina kukura kupfuura 630A. Ndezvemidziyo yekuparadzira yechipiri ...
Musiyano uripo pakati pekabhokisi kabazi bhokisi uye mhete mambure bhokisi
Ikozvino kuvandudzwa kwemagetsi indasitiri, kushandiswa kwenzvimbo dzakawanda uye zhinji, vanhu vazhinji havagone kutaurira tambo yebazi bhokisi uye mhete keji, inotevera Ming Qi ichataura nezve mutsauko uripo pakati pebazi rebazi bhokisi uye mhete keji. Basa guru rekabhokisi rebazi rekambo ndeye kubazi kana tran ...
Musiyano uripo pakati peAmerican mhando neEuropean mhando
Photovoltaic bhokisi shanduko rakakamurwa kuita United States neEurope, saka ndoupi mutsauko pakati pezviviri? Aya anotevera magetsi eNuo kwauri anorongedza rumwe ruzivo kuti utsanangure mutsauko uripo pakati pemaAmerican photovoltaic bhokisi neEuropean bhokisi. Kazhinji, iro vhoriyamu re ...